YAANYO "JAPANESE CRAB": SAWIRADA BAADIYAHA, SHARAXAADA KALA DUWAN IYO SIFOOYINKA - NOOCYO YAANYO
Ugu Weyn Ee Noocyo yaanyo
Tomato "Japanese Crab" - noocyada ugu fiican ee saladh iyo casiir
"Japanese crab" waa noocyo kala duwan oo tamaandho ah, taas oo ah mid aad u caan ah sababtoo ah dhadhanka wanaagsan, taas oo ka soocaysa noocyo kale oo yaanyo.
Noocyada noocaan ah, sida kuwa kale, waxay leeyihiin tiro astaamo ah oo ay tahay inaad barato ka hor inta aadan bilaabin beerista yaanyadaas.
Muuqaal iyo sharaxaad kala duwan
Kobaca tamaandhada kala duwan ee noocaan ah ma aha mid xadidan, sidaas darteed baaxadda yaanyada waxay ku xiran tahay xaaladaha iyo xilliga beerashada, waxayna noqon kartaa mid gebi ahaanba ka duwan.
Laakiin, sida caadiga ah, yaanyada sida kor u weyn. Waxaad ku kori kartaa labadaba xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo iyo dhul furan ama hoostooda hoostooda.
The duurka dhirta leeyihiin caleemaha cagaaran-cagaaran ee size dhexdhexaad ah, gaaraan height ah qiyaastii 2 mitir, 6 burush ayaa ka heli kartaa mid kasta oo iyaga.
Sida laga soo xigtay sharaxaadda, yaanyada Jasiiradda Cusub waa sahlan in ay kala soocaan miraha noocyo kale. Waxay u qaabeysan yihiin qaabab hoose, oo leh hargab yaryar. Midabka tamaandhada ayaa isbeddelaya marka ay u bislaadaan cagaaran ilaa casaan iyo casaan, casaan ama jaalle.
Miraha waa mid casiir leh, firfircooni, ma cufan, at the footboard yar yihiin ribbed. Miisaanka hal yaanyo waa 300-400 g. "Japanese crab" waa noocyo sarraysa oo sarreeya: kormeerida farsamooyinka beerta saxda ah, 11 kg oo yaanyo ah ayaa laga soo ururin karaa hal m2 oo beerto.
Gaar ahaan noocyada kala duwan ee yaanyada sida "Pink Stella", "Sugar Pudovik", "Bear Paw", "Troika", "Eagle Beak", "Madaxweyne", "Clusha", "Rio Fuego", "Alsou", " Auria "," Lazy ".
Faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka kala duwan ee kala duwan
Iyadoo ku saleysan dib-u-eegista beeralayda iyo beeraleyda, faa'iidooyinka soo socda ee noocyada kala duwan ayaa loo aqoonsan karaa:
caabbinta cudurada ugu badan;
tayada sifooyinka. Bannaanka u Most u fiirso ka sarreeya ee dhadhanka Yaanyinka Japanese Cagaar ka badan noocyo kale yaanyo;
biqilka abuurka - in ka badan 95%, oo ah tilmaam aad u sarreeya tayada;
Isdhexgalka sare ee sifooyinka heerarka kala duwan. Maaddaama kala duwanaanta noocaas ah loo soo boobey si gaar ah beerashada Siberia, oo loo yaqaano xaaladaha cimilada adag, muuqaalkani waa faa'iidadiisa ugu weyn.
Waa muhiim! Xaqiiqda ah "Japanese Crab" waxaa loo duuduubay beerashada xaaladaha adag ee Siberian waxay si xun u saameeyaan suurtogalnimada abuurista guulo ee gobollada koonfureed. Meelaha ugu fiican ee yaanyada noocan oo kale ah waa degaanno leh xaalado cimilo qatar ah oo koonfurta ah.
Sida cilladaha, ma jiraan wax badan oo ka mid ah "Japanese Crab". U qaybi kaliya baahida loo qabo in si adag loo raaco caadooyinka abuurka abuurka iyo daryeel joogto ah oo dhirta.
Cuntada yaanyada "Japanese Crab" waxay si toos ah ugu tiirsan tahay tiknoolajiyada abuurka iyo koritaanka abuurka, sidaa daraadeed waa muhiim inaad raacdo dhaqanka beeraha oo aad ogaatid xeerarka aasaasiga ah ee daryeelka duurka.
Xajinta ee daryeelka, taas oo ah ugu weyn oo kaliya ee kala duwan ee noocyada kala duwan, waxay saameyn kartaa natiijada dhamaadka beerista yaanyada.
Diyaarinta abuurka, abuurka abuurka iyo daryeelka iyaga
Koraaya dalagga this, inta badan ku dhacdo habka seedling, tan iyo beerashada abuurka isla markiiba ee dhulka furan ma siin natiijooyinka la filayo.
Si sprouts ka soo soo baxo abuurka, ka hor beerto, waa in lagu hayaa dhowr maalmood (2-3) ee xal aan aad u xooggan ee daloolka potassium, ka dibna maydheen.
Bilaha ugu haboon ee lagu beerayo abuurka waa bisha Maarso (8-10aad). Qoto beereed waa inay ahaataa 1 cm. Ka dib muuqaalka 2 ee caleemo, dhirta ayaa u baahan in la qaado.
Ma taqaanaa? Jamaacada ugu weyn ee adduunka ayaa waxaa koray Gordon Graham oo ku yaal Edmond bartamihii 1980-meeyadii. Miisaankeedu wuxuu ahaa 3.51 kg. Isla qofku wuxuu koray yaanyo yaanyo ah, oo dhererkiisu gaadhay 16 m. Waxaa sidoo kale la soo wariyay in 347 maalmood ay ka korodheen tiro ka badan 12,000 oo ah tamaandhada hal duur.
Seedling iyo beeritaanka dhulka
Laga soo bilaabo aqalka dhirta lagu koriyo, qalab kululaynta, geedo lagu beeray karaa April, haddii filinka dhirta lagu koriyo, waa in aad sugto ilaa 65 maalmood ka dib laga beerto miraha, kadibna kaliya dib u soo baxa duurka.
Sida caadiga ah, tani waa bilowga Maajo. Yaanyada noocan oo kale ah waxay ubaahan tahay meel, sidaa darteed wax ka badan 4 dhirta waa in loo isticmaalaa m2, labadaba aqalka dhirta lagu koriyo iyo ka dib - carrada furan.
Ciidda ee aqalka dhirta lagu koriyo waa in si joogto ah u qoyaan ka hor caleemaha ugu horeeya. Waxa kale oo muhiim ah in hawada maalinlaha ah ee beerta khudradda la daboolay.
At geedo meel joogto ah u baahan tahay in la beeray, raacaya xeerarka fudud:
Waa suurad wacan in ciidda aad qorsheyneyso inaad ku beerto "cusboollada Japanese", ka hor digiradan, kaabajka, qajaarka, basasha ama karootada koraan. Ma suurtoobayso sidaa darteed horursada yaanyada ee ciidda ahaa baradho, eggplant ama basbaas.
Dhulka waa in la furo oo la qooyay nafaqooyinka. Dhulka ugu fiican waa loamy.
Daryeelka iyo waraabinta
Tilmaamyada ugu muhiimsan ee Japan Cusbitaalada kala duwan ee daryeelka yaanyo:
waraabinta haboon ayaa muhiim ah: subaxda hore ama ka dib qorrax dhaca marka xididka ama ceelasha biyo qabow;
duurka waxay u baahan yihiin garaf, sababtoo ah culeyska miro waxay ku dhacaan dhulka, halkaas oo ay u badan tahay inay soo gaadhaan cayayaanka oo aan helin iftiinka qorraxda ama jaban.
Waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso qaabab si loo ilaaliyo dhirta miisaanka. Waxay noqon kartaa trellis, oo ku yaalla waktig ahaan ama qiyaas ahaan. Trellis Horizontal waxay kuu oggolaaneysaa inaad xirto yaanyada sida ay u koraan. Iyada oo caawimaadda trellis toosan waxaad ka badbaadin kartaa goobta goobta;
sida loo xoqo, nooca tamaandhiga ah waa in lagu koro 1-2 jir, tan labaadna waxaa laga sameeyay koontada qashin qubka.
Carruurta kale ee xayawaanka ah waa in ay jebiyaan gacanta, iyagoo ka tagaya "dhoobo yar", qiyaastii hal mitir oo dheer, si looga hortago abuurista cusub. Maaskarada ayaa si fiican loo qabtaa subaxdii, iyada oo aan laga saarin in ka badan saddex caleemo dheeraad ah hal mar;
caleemaha xad-dhaafka ah oo uumi-baxaya qoyaan xad-dhaaf ah oo qayb ka qaata nafaqooyinka waxay u baahan yihiin in la jarjaro. Yaanyada noocan oo kale ah waxay u kori karaan sida kuwa duuban, boostada oo aan iyaga ka baxin.
Waxaad soo qaadan kartaa miraha 115 maalmood ka dib marka la beerto (Julaay-horraantii Agoosto).
Cayayaanka iyo cudurrada
In kasta oo xaqiiqda ah in noocyada kala duwan ee cusbada Japanese-ka ee yaanyada loo duudduubay beerashada xaalado adag oo aad u adkaysata cudurrada ugu caansan, u hoggaansamida xeerarka beerista iyo daryeelka ayaa laga yaabaa inaanay ku filneyn inay soo saaraan dalag ballaadhan.
Ka hortagga cayayaanka iyo ka hortagga dhacdooyinka cudurada dhirta ayaa sidoo kale muhiim ah.
Waa muhiim! Marnaba ma dhali karin dhirta on top, waxay keeni kartaa cudurada fangas.
Si looga fogaado daawada phytophthora ama cladosporiosis, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkulka ugu fiican ee lagu koriyo oo aan ka badnayn heerkulka loo baahan yahay qoyaanka.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la buufiyo isku-darka daawada iodine oo leh caanaha (litir caano iyo 25 dhibcood oo iodine ah baaldi biyo ah). Haddii aad hore u aragtay calaamadaha cudurka (dhibco madow leh ubaxyo caleemo leh oo leh caleemo qoyan ama caleemo leh cladosporia) geedka, waxaa loo baahan yahay in la shaqeeyo seddex maalmood oo kasta:
laga bilaabo phytophtoras - ash, Trichopol ama Fitosporin;
laga bilaabo cladosporiosis - daawooyinka leh diirad sare oo naxaas ah.
Xaaladaha ugu badan ee udubdhexaadka ah
Si loo gaaro wax-soosaarka ugu sareeya ee yaanyada, waxaa lagu talinayaa in la bacrimiyo ciidda. Dareen-celiyeyaashu waxay u baahan yihiin in la sameeyo wax ka badan 3 jeer inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, haddii la sameeyo marar badan, caleemaha ayaa bilaabi doona in ay koraan si deg deg ah, taas oo yarayn doonta tirada ugxan-yare ee duurka.
Bacriminta Complex ku kordhay leh mareellooyin faa'iido leh ayaa ugu haboon. Joogtaynta dheelitirka nafaqooyinka ayaa muhiim u ah cimilada isbeddeleysa.
In kulaylka ee yaanyada u baahan nitrogen ka badan cimilada daruurta, marka ay u baahan yihiin potassium sababtoo ah la'aanta qoraxda.
Waxa kale oo suurtagal ah in la kordhiyo heerka dhalidda iyo yaraynta baahida loo qabo qoyaanka by suufka sariiraha leh cawska, cawska, balka ama warqad, kaas oo qudhmi iyo bacrimiya ciidda.
Kala duwan yaanyo "Japanese Crab" waa nooca ugu caansan ee loo isticmaalo saladhka. Sababtoo ah tirada yar ee abuurka iyo cufnaanta saxarada, yaanyadaas waxay si fiican u xafidaan qaabkooda, iyagoo siinaya cuntooyinka cayayaanka muuqaal wanaagsan.
Tilmaame-yaashu waxay suurtogal u tahay in lagu diyaariyo cunto fudud adigoo isticmaalaya yaanyadaas. Sidoo kale "Japanese Crab" waa wax aad u fiican caanaha, karinta lecho, suugo iyo casiir, yaanyo yaanyo.
Ma taqaanaa? Tamaandho - khudradda hadda ku jirta cuntada ee qof walba, ayaa markii hore loo tixgeliyey sumeyn, oo khatar ku ah nolosha qofka ku cabba iyaga. In Europe, waxaa la dhigay waqti dheer sida dhirta ornamental qurux badan oo qurxin kara guri ama beerta. Faransiiska ayaa ku beeray meelo pavilions ah, xitaa Ingiriiska ayaa koray yaanyada lagu koriyo.
Sidaa darteed, haddii aad raacdo farsamada ee sii kordhaya oo si taxadar leh u daryeelo yaanyada, waxaad heli kartaa dalagga weyn ee yaanyada, dhadhanka fiican ee hore loo soo sheegay by bannaanka u khibrad badan. Tamaandho noocyo "Japanese Crab" ma aha oo kaliya qurxinta delicious ee miiska, laakiin sidoo kale casiir fiican ama suugo.
Yaan caleemaha casaan F1 - yaanyo hore u bislaaday midabka raspberry
Dalka UK, digaagga lakabka ah, oo ay ukunteeda ka caawiso inay la dagaallanto kansarka
Irises lama duubo: sababaha dhibaatada iyo sida loo xaliyo
Beerto habboon iyo astaamaha yaanyada "Rapunzel"
Fasal canab "Rkatsitic" - sharaxaadda kala duwanaanta, hantida faa'iido leh, waxyeello
Xilliyo geedka Autumn
Motoble Neva MB 2
Cawska loo yaqaan 'pears'
Noocyo kala duwan
Grivun waa jinsi Ruush ah ee xamaam yar, kaas oo ku baahsan waqtigan xaadirka ah iyo qadarin ka mid ah jilayaasha xirfadlayaal badan. Taariikhda shimbiraha, qaab gaar ah ee duulimaadka iyo muuqaalku kama tagi doono qof aan jeclayn shimbir shimbir ah. Taariikhda caanaha Taariikhda asalka ah ee kobanaha waxay bilaabmaysaa Perm Territory, halkaas oo 1930 ka mid ah Subbotin M. Read More
Lentil, fennel iyo digirta ayaa noqday caan ku ah Ukraine
Maxaa la sameeyaa haddii geranium indoor uusan ubaxin
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo yaanyo 2020